KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Dab qasaare Qaystay oo ka kacay Kaamka Buulo Carafaad ee Koofurta Galkacyo
Sunday 9 December 2012 10:55
Dab qasaare Qaystay oo ka kacay Kaamka Buulo Carafaad ee Koofurta Galkacyo
Gaalkacyo (KON) - Xero ay deggan yihiin dadka soo barakacay oo lagu magacaabo Buulo-carafaat kuna taala Koofurta Magaalada Galkacyo ayaa Xalay Dab ka kacay, waxaana halkaasi ka dhashay Khasaaro badan.
Dabkaan ayaa Toddobo carruur ah ku dhaawacantay, 70 aqalna way ku bas beeleen.
Lama oga sababta ka denbaysay in dab ka dhasho Xerada Balse sida Wararku sheegayaan wuxuu ka dhashay Burjiko ay isticmaalayen dadka Xerada kadib kolkii ay Dabayl xoogan ku dhufatay kaamka .
Isla Xalay ayaa lagu guulaystay in la damiyo dabka, kaddib markii ay xerada soo gaareen gawaarida dab damiska ee Galmudug.
Guddoomiyaha Kamkaan ayaa ka codsatay Hay’adaha Samafalka in ay ka taageeraan Dadkaan khasaaraha soo gaaray.